Gijimani iiyure ezingama-5 ezinkulu iiMoyile eziHlaziyiweyo zeeoyile China Manufacturer
Inkcazo:Izitshisi zeoyile ezivaliweyo,Izixhobo eziMangalisayo zeoyile,Izitshisi ezinkulu zeoyile
Home > Imveliso > Ihotele Humidifier > Gijimani iiyure ezingama-5 ezinkulu iiMoyile eziHlaziyiweyo zeeoyile
Umzekelo No.: DT-1508L
Wamkelekile ivumba elimnandi eliyifosili ekhayeni lakho kunye neDITUO Essentialential Diffuser ye-oyile, imesins esebenzise ivumba lokuhambisa ivumba elinikezela ubungakanani obufanelekileyo bevumba ngemizuzu.
Yenzelwe ukuba isetyenziswe kunye ne-100% yendalo ye-oyile eyimfuneko yokudibanisa, ioyile yeefayile ikuvumela ukuba utshintshe ii-scents ukuze ulungele imo yakho; nokuba ufuna ukulala ngcono , ufuna uku-de uxinzelelo okanye uzive uphakanyisiwe kwaye unamandla. Ukusebenza ekuchukumeni kweqhosha, ivumba lasekhaya elihambisa ivumba elihle, lonyango ngelixa kunyibilikisa umoya okujikelezileyo.100% I-oli yendalo exubeneyo neziqholo zenziwa ukukhulisa umzimba wakho, ukuxhasa ingqondo yakho kunye nokukhulisa impilo yakho.
Kulula ukuyisebenzisa, i-ultrus diffuser inexesha elifanelekileyo lesimo esiguqukayo esikuvumela ukuba uqhubeke nokunandipha ubumnandi bayo kwiiyure ezintlanu ngaphambi kokuba uzicime . Kwakhona inika ukukhanya okuncinci kwamandla e-LED ebusuku ukwenza imeko yokuphumla.
Amandla aphantsi ebusuku ukukhanya kwelanga
Isibambi ixesha kunye noseto oluhlengahlengiswayo
Ukuthoba umoya okujikelezileyo
Ubungakanani: H: 140mm x W: 100mm
Izitshisi zeoyile ezivaliweyo Izixhobo eziMangalisayo zeoyile Izitshisi ezinkulu zeoyile Isitshisi seoyile esibi Isitshisi soMbane seoyile eziBalulekileyo Isitshisi sasekhaya seoyile eziBalulekileyo Izihlisi zeoyile zesithambisi Isitshisi soMoya kwiioyile eziBalulekileyo